Dowladda NORWAY oo si RASMI ah u aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Dowladda NORWAY oo si RASMI ah u aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya
Dowladda NORWAY oo si RASMI ah u aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya
Muqdisho (Caasimadda Online) – Dowladda Norway ayaa si rasmi ah u xaqiijisay inay aqoonsatay Baasaboorka Soomaaliya isla markaasna ay hadda kadib Visaha ku bixin doonto Baasaboorka Soomaaliga halkii ay markii hore ku dhufan jirtay waraaqo.
Agaaismaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo wareysi siiyey Laanta Afka Soomaaliga ee VOA ayaa arrintaan xaqiijiyey.
Koofi ayaa sheegay wada hadal dheer kadib inay dowladda Norwar aqoonsatay Baasaboorka Soomaaliya isla markaasna aysan arrintaan saameyn ku yeelan doonin Soomaalida dalkaas ku nool.
Taliyaha oo mar la waydiiyey tirade dowladaha aqoonsan Baasaboorka Soomaaliga ayaa sheegay inay arrintaas ku wadaan baaritaan balse wuxuu sheegay in Qaaradaha Africa iyo Aasiya guud ahaan laga aqoonsaday.
Sidoo kale wuxu sheegay marka la fiiriyo qaaradda Yurub inay Baasaboorka Soomaaliya aqoonsan yihiin dowladaha Faransiiska, Talyaaniga iyo Norway oo hadda kusoo biirtay, wuxuuna xusay in hadda wada hadal lagu jiro dowladda Ingiriiska.
Taliyaha ayaa dhanka kale sheegay inay ku dadaalayaan inay baasaboorka Soomaaliya ku qanciyaan dowlado ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Canada.
Koofi ayaa Sanadkii 2017 sidaan camal horey u sheegay inay dowladda Norway aqoonsatay Baasaboorka Somalia, arrintaasna waxay noqotay wax kama jiraan, lamana ogo sida uu u dhaqan geli karo hadalkaan cusub ee sanad kadib kasoo yeeray Koofi sida aad ka aragtaan sawirka hoose oo ah wareysi uu Sanadkii 2017 siiyey Radio Muqdisho
Haddaba halkaan hoose ka dhageysi Wareysiga uu Koofi siiyey Idaacadda VOA